Ama-Aries constellation: izici, imvelaphi, izinganekwane nezinkanyezi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Njengoba sazi, esibhakabhakeni sonke sithola kaningi izinkanyezi ukuthi aziyilutho ngaphandle kweqembu lezinkanyezi elihlangana ndawonye linikeze ukwakheka okuthile. Kulokhu, sizokhuluma nge- i-constellation Aries. Ingenye yezinkanyezi eziyi-12 zezinkanyezi. Indawo ye-zodiac yileso simo sasezulwini lapho ilanga libonakala lihamba khona. Kuthiwa lapho ilanga libonakala lihamba khona, kwazise siyazi ukuthi ilanga liyinkanyezi esendaweni eqondile. Kubhekisa kuphela endleleni ebonakala ngathi iyalandelwa ngumqapheli womhlaba.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, ukwakheka kanye nesifiso senkanyezi yama-Aries.
1 Ukwakheka komlaza wama-aires
2 Imvelaphi yezinganekwane
3 Umlaza ngezinganekwane zamaGrikhi
4 Izinkanyezi ze-constellation Aries
Ukwakheka komlaza wama-aires
Luhlobo lokuqoqwa kwezinkanyezi olutholakala phakathi kwezinkanyezi Ama-Pisces futhi of I-Taurus. Lezi zinkanyezi ezimbili nazo bangabeqembu elitholakala endaweni yezinkanyezi. Umlaza i-Aries ubusaziwa kusukela ezikhathini zasendulo kusukela ubonakala kwikhathalogu yezinkanyezi eyenziwe nguPtolemy futhi eqoqa izinkanyezi ezingama-48. Le khathalogi idaliwe kusukela ngekhulu lesibili emva kukaKristu.
Kubo bonke labo bantu abafuna ukubona ngeso lengqondo izinkanyezi zomkhathi, kufanele ufune i-constellation yama-Aries ku-quadrant yokuqala yezwe elisenyakatho. Kungabonakala cishe kunoma iyiphi i-latitude inqobo nje uma ingaphezulu kwama-degree angama-60 eningizimu. Inosayizi ophakathi nendawo futhi ithatha indawo yama-39 phakathi kwamaqoqo ezinkanyezi anamuhla angama-88 ahlelwe ngosayizi. Imilaza yanamuhla i-oda ngosayizi kusuka kokukhulu kuya kokuncane kakhulu ukuhlukanisa ngayinye yazo. Indawo engaphezulu komkhathi wasezulwini womlaza womoya icishe ibe ngama-degree angama-441 square.
Ukuze sikwazi ukubona kahle le nkanyezi siyabona ukuthi imiphi imilaza engomakhelwane. Lokhu okulandelayo: Perseus (I-Perseus), i-Triangle (i-Triangulum), i-Fishes (i-Pisces), i-Keto (i-Cetus) ne-Taurus (i-Taurus). I-constellation Aries ingenye yezinto ezaziwa kakhulu phakathi kwezazi zezinkanyezi njengoba idala ishawa eyaziwayo yemeteor. Njengoba sazi, kunezihlambi zezinkanyezi njalo esibhakabhakeni. Phakathi kwalezi zihlambi zemkhathi ezikhiqizwe yile nkanyezi sine-Arietids eguquguqukayo ehlobo, kanye ne-Epsilon Arietids neMay Arietids.
Esinye isizathu sokuthi kungani kubalulekile ukuthi izinkanyezi eziningana zitholakale namanye amaplanethi azizungezayo.
Sizokwazi ukuthi uyini umsuka wenganekwane wale nkanyezi. Isilwane esimele ama-Aries yinqama. Lokhu kungenxa yokuthi ama-Aries avela esiLatini futhi asho inqama. Njengoba sesivele saziwa ngempucuko yaseBabiloni, ekuqaleni yayinohlobo lomsebenzi wezolimo. Kwakusekuqaleni kwesikhathi sempucuko yaseBabiloni lapho iqembu lonke lezinkanyezi lihlanganiswa nesibalo senqama. Kodwa-ke, kufanele sazi ukuthi lolu uhlobo lokuhlangana. Ayimile ncamashi njengenqama.
Enye impucuko eyayinolwazi ngale nkanyezi kwakuyimpucuko yaseGibhithe. AbaseGibhithe bahlobanisa ukuqoqwa kwezinkanyezi noNkulunkulu Amun. Umehluko ukuthi ezikhathini eziningi ukuma kwalo mlaza kwakumelelwa ngekhanda lenqama.
Ilukuluku le-constellation yama-Aries ukuthi eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule i-equinox yasentwasahlobo yenzeke ngesikhathi kudlula kulo mkhanyezi. Lokhu kwenze lelo phuzu lapho i-equinox idlula khona phakathi komlaza wama-Aries inegama lephuzu le-Aries noma iphuzu le-vernal. Kuleli qophelo lapho i-equinox yasentwasahlobo ihlangana khona nomlaza, bekubhekwa nokuthi kulapho kwaqala khona indawo yezinkanyezi. Ukuqokwa kwaleli phuzu kugcinwe kuze kube namuhla, ngaphandle kokuthi kuma-equinox ngaphambi kwabo. Ukuqagela kwama-equinox kwenza manje i-equinox yasentwasahlobo idlula emiphakathini yezinkanyezi. Ngokuzayo izodlula komunye wemilaza.
Umlaza ngezinganekwane zamaGrikhi
Isibalo sama-Aries sihlotshaniswa nenqama eyasindisa uFrixo noHele. Ngokwenganekwane eyaveza le nkanyezi, laba balingisi babengamadodana eNkosi u-Atamante nonkosikazi wakhe wokuqala uNefele. Njengoba unkosikazi wesibili wale ndoda ezwa inzondo enkulu nomona ngaye wanquma Woza necebo lokubabulala bobabili. Icebo kwakungukudala indlala embusweni wonke ngakho-ke kwakudingeka benze umhlatshelo konkulunkulu ukuqeda indlala. Umhlatshelo wawungelutho olunye ngaphandle kokubulala uFrixo noHele. Owesifazane wazisa umyeni wakhe ukuthi i-oracle eDelphi iyona eyayimtshela ukuthi kufanele anikele ngoPhryxus noHele.
Lapho iNkosi u-Atamante isizonikela ngezingane zayo, kwafika ama-Aries. Kukhona iwayini elithunyelwe nguNefele, umama kaFrixo noHele. Ngenxa yalokhu kungenelela ukwazile ukuhlenga izingane futhi ngizitshela uColchis. Indaba ayizange iphele kahle kusukela UFrixo akakwazanga ukusinda kulolu hambo.
Izinkanyezi ze-constellation Aries
Le nkanyezi inezinkanyezi ezimbalwa ezithokozisayo. Kodwa-ke, izinkanyezi ezintathu ezibaluleke kakhulu kule nkanyezi yi-Alpha, Beta, neGamma Arietis. Ingqikithi umlaza unezinkanyezi ezingaba ngu-67 okulandela igama leBayer. Ngaphandle kwalokhu, babili kuphela babo abanobukhulu obubonakalayo obunenani elingaphansi kuka-2. Ake sibone ngokuningiliziwe futhi yiziphi izici zezinkanyezi ezi-3 ezibaluleke kakhulu kule nkanyezi:
U-Alpha Arietis: iyona ekhanya kunazo zonke izinkanyezi ezingama-Aries. Kuyaziwa nangokuthi igama likaHamal. Kusele iminyaka engu-66 yokukhanya futhi kuyinkanyezi enkulu eneplanethi ezungeza yona.
I-Beta Arietis: Kuyaziwa nangokuthi igama likaSheratan. Kuyinkanyezi kanambambili enobukhulu obubonakalayo obungu-2.66. Ingxenye eyinhloko yale nkanyezi yinkanyezi emhlophe eluhlaza okwesibhakabhaka.
I-Gamma Arietis: yaziwa futhi ngegama elijwayelekile leMesarthim. Njengaku-beta, kuyinkanyezi kanambambili eyenziwe ngezinkanyezi ezimbili ezimhlophe ezizungeza isikhungo esivamile esineminyaka engama-5000. Ubukhulu bale nkanyezi ehlanganisiwe ngokusobala bungu-3.86 futhi itholakala ebangeni eliyiminyaka engu-164 yokukhanya ukusuka kusimiso sonozungezilanga.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomlaza wama-Aries.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » I-Constellation Aries